FIANARANTSOA - LOZA : Rangahy maty tsy tra-drano notetezin’ny Kamiao, nipotsaka ny atidohany
Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina teo an-tampon-tanànan’i Fianarantsoa omaly maraina. 20 avril 2017
Lehilahy iray vao erotrerony no maty tsy tra-drano tamin’izany. Manakaiky ny tobin-dasantsy tao Ankazondrano no nitrangan’ny loza. Nihoron-koditra izay nahita maso ny loza satria nipotsaka mihitsy ny atidohan’ilay lehilahy. Ankoatra izay mbola notetezin’ny kodiaram-ben’ilay kamiao “semi-remoroque” ihany koa ny vatany iray manontolo.
Araka ny fanazavana avy amin’ireo nahita maso ny tranga dia nianjera tampoka tany anaty arabe ity niharan-doza, tamin’io indrindra anefa no nisy kamiao be nandalo izay tsy nanampo na inona na inona akory ny mpamily ka avy hatrany dia nifatratra tao ambany kodiaran’ilay fiara ny lohan’ilay lehilahy. Mbola tsy tafajanona tamin’io anefa ity fiara vaventy fa mbola notetezin’ny kodiarana ihany koa ny lamosiny nahazo ny rantsam-batany ambany iny.
Tsy nisy azo natao, potipotika tsy nisy noraisina ny vatan’ilay niharan-doza. Tonga teny an-toerana naka ny razana ny BMH Fianarantsoa rehefa nahare ny vaovao.